Weerar Lagu soo Qaaday Masjid ku yaal Gaalkacyo
Masjidka Ramadaan ee magaalada Gaalkacyo oo baryahaan ay ka socotay Nadawo Cilmi ah ayaa habeenkii xalay waxaa ku soo duulay 19 nin oo ku hubaysan toorrayo, nimsnkaas oo ka tirsan dariiqada Heemo oo ku abtirsata Sh. C/laahi Baardheere oo burburkii ka dib laga soo musaafuriyay magaalada Baardheere ka dib markii uu ka dhex sameeyay dadweyanaha deegaankaas khaakhuul nabadgalyo.
Aqoon iswaydaarsi Cilmiyeed ka Furmay Gaalkacyo
& 500 oo wiil oo seminaar looga furay Muqdisho Guji july 13
Ragga soo duulay waxay ku bilaabeen falkooda hadal iyo buuq, ka dib markii hawlwadeennada masjidka iyo dadweyne kale isku dayeen inay fariisiyaanna waxay kaga jawaabeen inay toorray ku dhuftaan ama ku eryadaan dadka iyagoo toorray ku dhaawacay laba nin kuwo kalana ku daqray budad, iyadoo qaybta farsamada iyo warbaahinta ee Nadwadu ku gulaysteen inay Vedio Camera ku duubaan dhammaan dhacdadaas, taas oo sahlaysa in la wada aqoonsado lana wada helo dhammaan ragga falkaas ka qayb qaatay. Muddo qiyaasta toddobo daqiiqo gudohood ah ayay ku guulaysteen hawlwadeennada masjidku inay dibada u wada saaraan raggii soo duulay ka dibna waxa bilowday muxaadarooyinkii iyo fataawihii oo u dhacay sidii loogu talagalay. Waxaa inataa dheer in labo ka mid ah dariiqada ay soo gaareen dhaawacyo fudud. Nimankaan oo ku socday qorshe ay wax ka ogaayeen qaar ka mid ah maamulka gobolka Mudug ayaa ujeeddadoodu ahayd:
1- Inay ridaan rabshad loogu gabbado joojinta nadwada cilmiga ah.
2- In ay u muujiyaan Nadwooyinka iyo hawlaha kale ee ducaaddu wadaan wax dhib soo kordhinaya.
3- In rabshadaani noqoto mid hadda ka dib loo daliishado in colaadi ka dhalanayso tillaabo kasta oo ay qaadaan ducaaddu.
Xafladii furitaanka aqoon iswaydaarsigaas waxaa ka soo qayb galay culimada deegaannada P/land iyo maamulka gobolka Mudug oo ay ka joogeen guddoomiye ku xigeenka gobolka Maxmed Cumar Saalax iyo taliye ku xigeenka qaybta booliska Axmed Barre Shiil (Axmed dheere), Xafladdaas waxaa hadal ka soo jeediyay guddoomiye ku xigeenka gobolka oo ku soo dhaweeyay culimada gobolkooda, ugana mahad celiyay cilmiga iyo wacyigalinta ay siinayaan dadwaeynaha reer Gaalkacyo, Guji
Waxaa xusid mudan in guddiga nabadgalyada gobolku soo saaray go’aan lagu oggolaanayo laguna taageerayo qabashada nadwadaan cilmiga ah, xafladdii furitaanka Nadwadana waxaa ka soo qaybgalay qaar ka mid ah maamulka oo iyagu furay, isla markaana muujiyay taageerada maamulka, uguna yeeray dadweynaha inay ka faa’iidaystaan Nadwadaan, waxaase yaab noqotay markii la ogaaday in qaar ka mid ah maamulku wax ka ogaayeen, kana dambeeyeen dhibaatada dhacday, raggaas oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka daraawiishta iyo agaasimaha waaxda diinta oo labaduba ka tirsan dariiqadaas. Waxaa kale oo la tuhunsan yahay taliye ku xigeenka qaybta booliska oo isagu joojiyay inay yimaadaan ciidanka bilayska oo ilaalinayay nidaamka iyo hagista gaadiidka, ka dibna ciidankas la soo diray markii rabshadu dhacday ka dib isla marakaana uu rabshada bilaabay wiil uu adeer u yahay.
Guddiga qabanqaabada Nadwada ayaa sheegay inay soo bandhigi doonaan qoraal ay kaga hadlayaan waxa dhacay, cidda ka dambaysay iyo dacwad ay u gudbin doonaan maxkamadda, sidoo kale waxay kulamo gaar gaar ah la yeesheen Isimada, waxgaradka magaalada Gaalkacyo iyo xubno ka mid ah maamulka gobolka iyo degmada. Waxaa kale oo guddigu saaka la kulmeen qaar ka mid ah ducaada iyo ardada masaajidda, waxayna ka codsadeen in aan wax tillaabo ah la qaadin oo ku aaddan dariiqadaas.
Isbitaalka weyn ee Gaalkacyo ayaa saaka waxaa hortubnaa dadweyne farabadan oo aad uga caraysnaa waxa ay dariiqadaas iyo kuwa ku qaraabtaa sameeyeen, qaar ka mid ah ducaadda magaalada ayaa u soo jeediyay qabaa’ilka ay ka dhasheen ragga la dhaawacay in ay arrinta dajiyaan oo lagu xalliyo wada hadal. Guddiga qabanqaabaduna waxay ku baaqeen in degdeg loo soo qabqabto dambiilayasha, si aysan u dhicin in arrintu faraha ka baxdo iyadoo ay magaalada Gaalkacyo horay u qasnayd.
Gudiga qabanqaabada Nadwada ayaa doonaya in ay la kulmaan madaxwaynaha DGPL oo la filayo in uu booqasho ku yimaado magaalada Gaalkacyo, si a ugala hadlaan dhacdooyinkaan iyo sidii loo xakamayn lahaa xadgudubyada dariiqooyinka oo dhibweyn ku haya nabadgalyada gobolkaan.
Gabagabadii waxay noqotay dhacdadaani sheekada magaalada Gaalkacyo, iyadoo meel kasta dadku ay ku falanqaynayaan falka foosha xun ee ay ku kacday dariiqada HEEMO, waxaana dadweynuhu isweydinayaan waxa ku kallifay inay weeraraan masjid lagu aqriyayo diinta islaamka oo ay joogaan culimadii ugu waaweynayd P/land oo marti u ah reer Gaalkacyo.
BAYAANKII CULIMADA SOOMAALIYEED EE KU AADANAA DASTUURKA